Lada Granta - imoto yasekhaya, oluqanjwe AvtoVAZ ngo-2011. Umshini ekhiqizwa ngesisekelo imodeli Lada Kalina futhi kuyinto-umnyango ezine esihlalweni ezinhlanu-sedan. Ngo-2013, ukubukeka nalehleliwe imoto kule nguqulo hatchback.
Lada Granta: ezibekiweko lobuchwepheshe
Ubude emzimbeni imodeli - 426 cm, ukuphakama esingeqile 150 cm, ububanzi - 170 cm Umshini itholakala 3 izinguqulo :. Suite, izinkambiso kanye nezinqubo. It is kuhlelwe ukuqedela ukubukeka kwenye: + suite. Zonke onobuhle abe gumbi umthwalo 480 amalitha futhi CPR (4-speed ngokuzenzekelayo noma mathupha 5-ngesivinini). I imvume wesisekelo mshini 16 cm. Umkhawulo isisindo Imininingwane incike ukuguqulwa futhi 1515-1575 amalitha. Flow Ukukala incike ukumisa. Ubuncane petrol uyaqhubeka umgwaqo ezingenalutho - mayelana 5,8-6,1 amalitha. Ngo kuhlangene umjikelezo petrol ukukhuphuka 7.2 - 7.3 l, futhi ngenkathi ushayela emgwaqweni edolobheni ngoba ifinyelela 8.5 - 9.3 amalitha. Izinga esiphezulu ukusheshisa ku uhla 164,5 - 168,5 km / h.
Harmony Grant, izici kanye nencazelo ephelele "ejwayelekile"
Umshini eyisisekelo "ejwayelekile" anemisila inertial emotweni nama-airbag ohlangothini esihlalweni somshayeli. Ngaphezu kwalokho, ayemisa akwazi ukugcina kucindezelwe 13 amasentimitha futhi izibani emini ukugijima ku headlamps.
Lada Granta, izibuyekezo abanikazi
AvtoVAZ isikhathi eside abaseBhayibhelini abavumelanga lutho ngaphandle onobuhle, ephelelwe yisikhathi kokubili ngokokuziphatha futhi ngobuchwepheshe. Lada Granta futhi Lada Kalina - izimoto ngokuyinhloko entsha, ingashintshwa ukuze emakethe yesimanje. Nokho imigqa bushelelezi, umumo ovikelekile, uma ziqhathaniswa izimoto angaphandle, ukuklanywa ezinye elula-nomqondo - Ngaphandle, imodeli ubukeka ngempela zanamuhla. Umshini mikhulu, it kalula ukulingana abagibeli amade futhi olubanzi engathwala. Nokho, uma uhambisa esihlalweni somshayeli yonke indlela, wahlala ku ngamadolo umgibeli ehlezi esihlalweni esingemuva emotweni Lada Granta.
Izibuyekezo abanikazi abonisa ukuthi umshini ingashintshwa ukuze sezulu Russian. Akusiyo imfihlo ukuthi kwezinye izindawo eziningi zakuleli zwe ku yesithwathwa ebusika iwe ngezansi -35 futhi igcinwe amasonto. Ngakho, umshini kufanele kube lula ukuba enze ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi futhi sekuqala ukufudumala ngokushesha. Abashayeli bathi lokhu imodeli babhekane ngokuphumelelayo lezi zinkinga.
Mayelana ukuthembeka imoto kunzima ukukhuluma, kwakhululwa yakhe esanda kutholakala, futhi izinkinga Russian imoto isiqalo eminyakeni emihlanu, emva kokuba esehlile le yokwakha izimoto eziningi. Nokho, labo lucky eyayinecilongo ithuba ukuthenga mthandazo oyisibonelo, kakade sibhekene iloli elincane. Yiqiniso, abanikazi bathi izindleko ongaphakeme nokutholakala izingxenye ezisele inkonzo. ipotimende elikhulu - enye plus imoto Lada Granta. Izibuyekezo wabanikazi futhi ubonise ukuthi imodeli ukonga ngokuya petrol.
Enginakho imoto kanye nenombolo yokuntula. Endaweni yokuqala kungase kuqashelwe izinga abampofu soundproofing imoto Lada Granta. Izibuyekezo abanikazi abonisa ukuthi kushintshile kancane kube ngcono uma kuqhathaniswa "zakudala". Abaningi akhononde kanzima, plastic ezishibhile, okuyinto squeaks njalo. Manageability futhi kushiya okuningi okufanele oyifunayo.
Imoto Lexus Rx 350
Zokuyithambisa ubisi amakhowe: iresiphi kanye namathiphu
Abamba Ukushisa "Uralochka". Izici obandayo